माईता गएको श्रीमती एकाएक सम्पर्क बिहिन, मोबाईलमा भेटियो ना*गो फोटा । हेर्नुस भिडियो सहित - Man Xune Kura
माईता गएको श्रीमती एकाएक सम्पर्क बिहिन, मोबाईलमा भेटियो ना*गो फोटा । हेर्नुस भिडियो सहित
कृपया यो पनि पढ्नुस् – आउँदो साता सार्वजनिक हुँदै ‘वनप्लस १० प्रो’, कस्ता होलान् फिचर ? – बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन ‘वनप्लस १०’ प्रो यही जनवरी ११ तारिख अर्थात आउँदो मंगलबार विश्वबजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ । चिनियाँ समय अनुसार मंगलबार २ बजे यो फोन सार्वजनिक हुनेछ ।
कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा वनप्लस १० प्रो को टिजर राख्दै यस विषयमा जानकारी दिएको हो । कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार फोनको पछाडि भागमा एउटा फ्ल्याश लाइटसहित तीनवटा क्यामेरा रहने छ ।कम्पनीका सह-संस्थापक तथा सीईओ पेटे लाउले स्मार्टफोनमा स्पेसिफिकेशन त्यति महत्व नहुने बताउँदै विबोमा आफ्ना फलोअरलाई भनेका छन, ‘उत्कृष्ट कार्यक्षमता आवश्यक पर्छ ।’
यसको अर्थ उनले स्मार्टफोनको थप जानकारी भने दिएका छैनन् । तर, यो फोनमा स्न्यापड्रागन ८ जेन १ चिपसेट रहने अपेक्षा छ ।त्यस्तै ८० वाटको वायर्ड र ५० वाटको वायरलेस चार्जिङ सिस्टमसहित फोनमा ५५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहने अनुमान छ ।६.७ इन्चको सुपर एमलोड डिस्प्ले रहने चर्चा गरिएको यो फोनका लागि कम्पनीले चिनियाँ बजारमा प्रि-बुकिङ समेत खुला गरिसकेको छ ।
The post माईता गएको श्रीमती एकाएक सम्पर्क बिहिन, मोबाईलमा भेटियो ना*गो फोटा । हेर्नुस भिडियो सहित appeared first on Crush Angle.
Previous: मधेस केन्द्रित दल खाेल्ने प्रतिश्पर्धा, तमलोपा र राजपा नेपाल पार्टी पुनः दर्ता
Next: संसारकै कमजोर राहदानीको सूचीमा नेपाली राहदानी, उत्तर कोरियाको भन्दा पनि कमजोर